မြန်မာကျောင်းဆရာများ: November 2009
Wednesday, 16 September 2009 19:01
ကောင်းကင်ကို စိုးမိုး ပျံသန်း နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တဲ့ မောင်သောင်ဒီ ကတော့ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ချီဘာမြို့မှာကျင်းပ ပြုလုပ်မယ့် အိုမီဂါရီ စက္ကူလေယာဉ် ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် ဒီနေ့ပဲ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။
“ကျနော့်ကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က အကောင်းဆုံး ကြိုးစားဖို့ အားပေးစကားပြောတယ်၊ တကယ်လို့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရခဲ့ရင် သူ့ကို အရင်ဆုံးလာ တွေ့ဖို့ပြောတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော် အခု ပထမဆုရဖို့အတွက် လက်တွေ သန်မာအောင် အပြင်းအထန် လေ့ကျင့် နေတယ်” လို့ မောင်သောင်ဒီ က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျောင်းစတက်ခဲ့ရတဲ့ မောင်သောင်ဒီဟာ ၁ တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ကတည်းက စက္ကူနဲ့ လေယာဉ်ပျံ ချိုးခေါက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားလေ့ ရှိခဲ့ရာက ၄ တန်းရောက်တော့ ချင်းမိုင် တက္ကသိုလ်က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ စက္ကူ လေယာဉ်ပျံ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ National Mental and Material Tenology (Mtec) က ကျင်းပတဲ့ စက္ကူလေယာဉ် ပြိုင်ပွဲမှာလည်း သူရဲ့လေယာဉ်က ၁၂.၅၀ စက္ကန့် ကြာ လေပေါ်မှာ ပျံဝဲနိုင်လို့ ပထမဆု ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုမီဂါရီ ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ တဦးဖြစ်လာတဲ့ အတွက် ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတာပါ။
မောင်သောင်ဒီက “ကျနော်က လေယာဉ်ပျံ တည်ဆောက်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်၊ စက်မှုလက်မှုကို ၀ါသနာ ပါတယ်၊ ကျနော်က ဖန်တီးရတာကို ၀ါသနာပါတယ်” လို့ သူ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ထိုင်း ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက သူ့ကိုခရီးသွားလတ်မှတ် ထုတ်ပေးဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူ့ အိပ်မက်တွေ ပျောက်ဆုံးလုမတတ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုပြီး ထိုင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး Chavarat Charnvirakul က မောင်သောင်ဒီကို ထိုင်းနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာနဲ့ တကယ်လို့ ဒီပြိုင်ပွဲကို သူ ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည် ကိုယ်စားပြုပြီးပဲ ဝင်ပြိုင်လို့ ရမယ် ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော့်ကို ပြည်ထဲရေးဌာနက ငြင်းလိုက်တော့ ၀မ်းနည်းတယ်၊ စိတ်မကောင်းဘူး၊ ကျနော်က ထိုင်းနိုင်ငံသားလို့ ပဲထင်တယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ အတွက်ကတော့ အာဏာပိုင်တွေ ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေဆီက တဆင့်ပဲ ကျနော်ကြားဖူးတယ်” လို့ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မောင်သောင်ဒီက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝရဲ့ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် မောင်သောင်ဒီဟာ ယာယီ နိုင်ငံကူး လတ်မှတ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် အကျိုးဆောင် ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က “တကယ်လို့သာ သွားခွင့် မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ကလေး တယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတာပဲ၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဒီလို ဆုံးဖြတ် လိုက်ခြင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတယ် ဆိုတာ ပြသလိုက်တာပဲ။ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အပေါ်မှာ စာနာရာလည်း ရောက်တယ်၊ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုကို အားပေးခံရတဲ့ အတွက် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ထူးချွန်နိုင်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မောင်သောင်ဒီရဲ့ မိဘတွေ အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းလည်း တက်နိုင်၊ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရတာလည်း လွယ်ကူပြီး အနာဂတ် ခရီး ပိုမိုကောင်းမွန် စေဖို့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသား ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ ဆန္ဒ ရှိနေပါတယ်။
တကယ်တော့ မောင်သောင်ဒီရဲ့ မိဘ ၂ ပါး ဖြစ်တဲ့ စိုင်းညွှန့်နဲ့ နန်းမွဲတို့ဟာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ခိုလန် ဇာတိ ဖြစ်ပြီးတော့ ရွာမှာ စီးပွားရေး မကောင်းတဲ့ အတွက် လက်ထပ်ပြီး သိပ်မကြာခင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ရောက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၂ သန်းကနေ ၄ သန်းထိ အလုပ် လုပ်ကိုင် နေကြပြီး အများစုက တရားမ၀င် လာရောက် လုပ်ကိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မောင်သောင်ဒီရဲ့ မိဘတွေ ရောက်စက FANG ဒေသမှာရှိတဲ့ လိုင်ချီး၊ လိမ္မော်တို့ စိုက်တဲ့ ခြံမှာ ၀င်လုပ်ခဲ့ရပြီး အဲဒီ ခြံပိုင်ရှင်ကအလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် မောင်သောင်ဒီကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ မှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့အတွက် ဆေးရုံကို မသွားရဲတာကြောင့် မွေးစာရင်းမရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
“အဲဒီတုန်းက အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ အတွက် ဆေးရုံကိုလည်း မသွားရဲဘူး၊ မွေးစာရင်း မလုပ်ခဲ့ရဘူး၊ FANG မှာ ၃ နှစ် ၄ နှစ်လောက် နေပြီးတော့ အလုပ်အကိုင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ချင်းမိုင်ကို လာခဲ့တာ၊ အဲဒီတုန်းက အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မရှိတော့ ဘယ်မှ မသွားရဲဘူး” လို့ မောင်သောင်ဒီရဲ့ မိခင် နန်းမွဲက ပြန်ပြောပါတယ်။
ချင်းမိုင်ကို ရောက်တော့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ပန်းရံအဖြစ်နဲ့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တနှစ်ပြီး တနှစ် သက်တမ်းတိုးလာတဲ့ သူတို့ရဲ့ အလုပ်သမားကတ်ဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကချမှတ်မယ့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဥပဒေကို စောင့်ဆိုင်း နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မောင်သောင်ဒီရဲ့ ညီမလေး မြူ ကိုတော့ ဟန်ဒုန်း ဘက်က ဆေးရုံတရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့ရလို့ မွေးစာရင်းကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“လုပ်အားခအနေနဲ့ ကျနော်က တရက်ကို ဘတ် ၁၈၀ (ကျပ် ၅၅၀၀ ဝန်းကျင်)၊ ကျနော့် မိန်းမက ၁၅၅ ဘတ် (၄၅၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်) ရတယ်၊ မနက် ၈ နာရီ ကနေ ညနေ ၅ နာရီ အထိ နေပူ မိုးရွာမရှောင် လုပ်ရတယ်၊ တခါတလေ အဆင်မပြေဘူး” လို့ စိုင်းညွန့်က ဆို ပါတယ်။
မိဘတွေ အနေနဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး သားသမီးကို ပညာ အမွေပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်း မောင်သောင်ဒီကို စတင် ကျောင်းအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က ပညာသင်စရိတ် အနေနဲ့ တနှစ်ကို ဘတ် ၁၀၀၀ (ကျပ် ၃၀၀၀၀ ဝန်းကျင်) ကုန်ကျခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ် ထိုင်းအစိုးရရဲ့ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ဥပဒေကြောင့် ငွေကုန်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မောင်သောင်ဒီတို့ရဲ့ မိသားစုက အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာကို မူတည်ပြီး ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ရတာကြောင့် တနေရာ တည်းမှာ အတည်တကျနေလေ့ မရှိဘဲ လက်ရှိ နေထိုင်နေတဲ့ အခန်းကို ပြောင်းလာတာ ၄ လပဲ ရှိသေးတယ် လို့ သိရပါတယ်။
“မောင်သောင်ဒီ မူကြိုတုန်းကတော့ ချင်းမိုင်မဲ့ကြိုးဘက်က ကျောင်းမှာထားတယ်၊ ၁ တန်းရောက်မှ ဒီအခုနေတဲ့ Ban Huay Sai ကျောင်းကို ပြောင်းလာတယ်၊ အိမ်က သူ့ကို အကြိုအပို့ လုပ်ပေးတယ်” လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ခိုလန်ရွာ ကနေထွက်လာပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စိုင်းညွှန့်နဲ့ နန်းမွဲတို့ အတွက်တော့ မောင်သောင်ဒီ့ကြောင့် သတင်းဌာနတွေရဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကို ဖြေကြား နေရတာက စိန်ခေါ်မှုတခု ဖြစ်နေပါတယ်၊
“သတင်းသမားတွေမေးတာကို ဖြေရတော့ ထိုင်းစကားတချို့တောင်ခပ်မေ့မေ့ဖြစ်ကုန်တယ်၊ တခုခုမှားသွားမှာ စိုးရိမ်တယ်၊ ကင်မရာတွေနဲ့ဆိုတော့ မလွတ်လပ်ဘူး၊ နေရခက်တယ်” လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ၂ နိုင်ငံလုံးက အသိအမှတ် မပြုတဲ့ နိုင်ငံမဲ့နေတဲ့၊ မောင်သောင်ဒီလို ကလေးတွေဟာ နယ်စပ် တလျှောက်မှာ မြောက်မြားစွာ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံမဲ့ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မောင်သောင်ဒီရဲ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲလာပြီးတော့ အစောပိုင်း တက်ကြွနေတဲ့ သူ့ရဲ့ အသံဟာ တိမ်ဝင် နစ်မြှုပ်သွားပါတော့တယ်။ ။
Tuesday, 24 November 2009 16:07 ရိုးမ ၃
ပဲခူးတိုင်း၊ သနပ်ပင်မြို့၊ ဘုရားကြီးပိုင်း (၁၂) လမ်းတွင် နေထိုင်သော ဦးစိုးလွင်၏ သားဖြစ်သူ အသက် (၁၆) နှစ်ရှိသော မောင်ကျော်မင်းဦးသည် မန္တလေးဘူတာတွင် ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၀၉ တွင် စစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခံရသည်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူမှ ပြောသည်။
မောင်ကျော်မင်းဦးသည် ဖခင်နှင့်အတူ မန္တလေးသို့ သွားရာမှ အပြန် ခိုးခံရသော အထုပ်ကို လိုက်ရှာနေစဉ် ကလေးပျောက် သွားသည်ကို နီးစပ်ရာထမင်းဆိုင်တွင် မေးမြန်းရာ စစ်သားငါးယောက်က ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သူ၏ ဖခင်ကပြောသည်။
“မန္တလေးမှာ ၂ ရက်နေပြီးတော့ ၃ ရက်နေ့မြောက်မှာ ပြန်မလို့ ညနေ ၆ နာရီခွဲမှာ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ မနက် ၅ နာရီ ရထားကို စီးမယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာပဲ ပထမညက ခိုးခံရတဲ့ အထုပ်ကို လိုက်တယ်။ အထုပ်က ပြန်ရ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်သားက အိပ်ပျော်နေတာပေ့ါလေ။ ပြန်လာတဲ့အခါမှာ စောင်ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ကျနော်သားက ပျောက်သွားတယ်” ဟုပြောသည်။
၎င်း၏ ဖခင်သည် အနီးအနားက ထမင်းဆိုင်မှာ မေးကြည့်သည့်အခါ စစ်သားငါးယောက်နှင့်အတူ လက်ဖက်ရည်နှင့် မုန့်များစားသွားပြီး အဆိုပါ စစ်သားတွေနှင့်အတူ ပါသွားတယ်ဟုပြောပြီး အခု အမှတ် (၄) စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်၊ ပင်လောင်းမြို့၊ အနော်ရထာတပ်ခွဲမှာ ရောက်ရှိနေသည်။
“ကျနော် စာရရခြင်းလိုက်သွားတယ်။ အဲဒီတပ်ကိုရောက်တော့ တပ်အဝမှာ ကျနော်ကို ဝင်ခွင့်မပြုဘူး။ ကျနော်ကို တပ်ကစောင့်တဲ့ ၂ ရစ်နဲ့ စစ်သားတယောက်က အပြင်ထွက်ပြီးတော့ စကားပြောတယ်။ ပထမမှာ ကျော်မင်းဦးဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြောတယ် အဲလိုပြောပြီးတော့ ရှေ့က ဆိုင်မှာ ထိုင်စောင့်ခိုင်းတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာမှာ သူပြန်ရောက်လာတယ်။ ဦးသားက မရှိတာမဟုတ်ဘူး ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ပေးတွေ့လို့မရဘူး အရာရှိတွေက ပြောထားတယ် ဧည့်တွေ လုံးဝ အခွင့်မပြုဘူးလို့၊ အဲတော့ အရှေ့လ (၁၂) လပိုင်း၊ (၁၅) ရက်နေ့မှာ သူတို့ သင်တန်းဆင်းမယ် အဲဒီအခါကျမှ ကျနော်ကို လာတွေ့ပါလို့ ပြောတယ်” ဟု ဖခင်ဖြစ်သူမှ ပြောသည်။
လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့မှ ဦးနိုင်မင်းကြည်ကလည်း အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးစစ်သားနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“တပ်မတော်အက်ဥပဒေ ၁၉၅၉ စက်တင်ဘာလ တပ်မတော်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၅ အရ တပ်မတော်သားထဲဝင်မယ်ဆိုရင် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးတော့မှ မိဘအုပ်ထိန်းသူ သဘောတူမှ ဝင်ရမယ်လေ၊ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းရမယ်လေ။ တပ်မတော် အက်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခုကလေးစစ်သားတွေ မရှိသင့်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်၍ အက်ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့။” ဟု ပြောသည်။
Tuesday, 24 November 2009 18:51
အဆိုပါ စာသင်ကျောင်းများသည် ထိုင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်၍ဖွင့်လှစ်ရန် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ပြုလုပ်သည့် အစိုးရ၀န်ကြီးများအစည်းအဝေးမှ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်း အာဏာပိုင်များ၏ ယခုအစီအစဉ်အသစ်ကို အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူများက ကြိုဆိုလိုက်သော် လည်း ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အခက်အခဲရှိသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖန်ငခရိုင် အခြေစိုက် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးရေးကော်မတီ (GHRE) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးထူးချစ်က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“တရားဝင် ဖွင့်ခွင့်ရတာကတော့ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာဆောင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေအတွက် နည်းနည်း အခက်အခဲရှိ တာက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ရွေးတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ကိုယ်တွေကတော့ အဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့ ထိုင်း ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုခန့်ဖို့ရှိတယ်”ဟု ကိုထူးချစ်က ပြောဆိုသည်။
GHRE အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အတွက် ပညာရေး၊ လူ့အခွင့်ရေးနှင့် လုံခြုံ စိတ်ချစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့် အခြေအနေများ ဖွံ့ဖြိုးမြင့်မားရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျောင်းတရားဝင် ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် ကျောင်းအဆောက်အဦးအား သီးသန့်ဆောက်ရေး၊ ထိုင်းအစိုးရက ပြဌာန်းထားသည့် သင်ရိုးညွန်တမ်းအရ သင်ကြာရေး၊ ပညာအရည်အချင်း ရှိသော ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများဖြစ်ရေး စသည့်အချက်များ ပါဝင်နေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုင်း -မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် Kwe Ka Baung စာသင်ကျောင်းမှ ဒါရိုက်တာ မန်းဗလစိန်ကလည်း ထိုင်းအစိုးရက ချမှတ်သည့် မူအရ ကျောင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျောင်းဟာ ကျောင်းနဲ့တူရမယ် ဆိုတဲ့အချက်က မြေကလည်း ဈေးကြီးတယ်၊ အခုပဲ မြေကြီးသွားကြည့်ပြီးတော့ ပြန်လာတယ်၊ မြေက တဧကကို ဘတ်ငွေ ၁၈ သိန်း ပေါက်ဈေးရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိသော မဲဆောက်၊ မယ်လမ၊ ဖုတ်ဖရ စသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းရှိမြို့ ၃ မြို့တွင်မြန်မာ ပြည်သား အလုပ်သမားများ၏ သားသမီးများ အတွက် ဖွင့်ထားသော စာသင်ကျောင်း အများအပြား ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ဒီမဲဆောက်ဒေသမှာတင် ကျောင်းပေါင်း ၅၀ မှာ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားပေါင်းက ၁၂၀၀၀ လောက်ရှိတယ်”ဟု မန်းဗလစိန်က ပြောသည်။
ချင်းမိုင်အခြေစိုက် Migrant Learning Center မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ သိန်းလွင်ကမူ ထိုင်းအစိုးရ၏ ယခုအစီအစဉ် ကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။
“ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက် တရားဝင် ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ ဒါ ကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကလေးတွေက ထိုင်းကျောင်းလည်း မတက်နိုင်ကြဘူး၊ ဘာသာစကားမှာ အခက်အခဲရှိတယ်၊ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က ထိုင်း ကျောင်းကို မသွားရဲဘူး၊ မိဘတချို့က လက်မှတ်မရှိလို့ လမ်းမှာ ရဲဖမ်းမှာစိုးလို့ စာသင် ကျောင်းတွေကို မသွားရဲဘူး အဲဒီအခက်အခဲ တွေရှိတယ်၊ ဒါကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်”ဟု ဒေါက်တာ သိန်းလွင်ကဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၁ သန်းကျော် ရှိသည့်အနက် သုံးပုံ နှစ်ပုံမှာ မြန်မာ ကလေးငယ်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အောင်ထက် / ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ အခြေခံပညာမူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းတို့မှ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးမှူးရုံးများသို့ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၂၄) ရက် နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည်ဟု အကြောင်းကြား ထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ပေးပို့ရာတွင် ယခင်က တင်ပြခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရေးအချက်များအပြင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကိုလည်း သီးခြားပုံစံတခုဖြင့် ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်ပေးရသည်ဟု သုဝဏ္ဏမြို့၊ အလက (၂) မှ ဆရာမတဦးက ပြောသည်။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည့် အသင်းအဖွဲ့အပါအ၀င် အချက်အလက် (၂၂) ချက်ပါဝင်သည့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ (၄) စောင်ကို ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ တင်ပြရသည့်အပြင် သီးခြားပုံစံစာရွက်၌ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်၊ မျက်မှန်တပ်ခြင်း ရှိ မရှိ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို ရှိ မရှိ စသည့်အချက် (၅) ချက်ကိုလည်း ပူးတွဲတင်ပြရသည်ဟု အဆိုပါဆရာမက ပြောသည်။
ကျောင်းလက်ခံ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ အမှတ် (၃) အခြေခံပညာဦးစီးနှင့် နေပြည်တော်ပညာရေးဌာနသို့ တင်ပြရန် ယခုကဲ့သို့ ပုံစံ (၄) စောင် ဖြည့်စွက်ရခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ထမ်းများက ပြောသည်။
ထိုသို့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ ပေးပို့ရေးအတွက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံခ (၁၀၀) ကျပ်၊ ဆေးစစ်ခ (၈၀၀) ကျပ်၊ နေပြည်တော် သို့ ပေးပို့ရန်အချက်အလက်သွင်းမည့် စီဒီဖိုး (၃၀၀) ကျပ်အပါအ၀င် စုစုပေါင်း (၁,၂၀၀) ကျပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ ပေးသွင်းရကြောင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမတို့က ပြောသည်။
ဆေးစစ်ခ တောင်းခံခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဆေးစစ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် တောင်းခံခြင်းလား၊
ငွေ (၈၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရုံဖြင့် ဆေးအောင်မည်ဆိုလိုခြင်းလား ဆိုသည်ကိုမူ မည်သူမျှ ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ပညာရေးဝန်ထမ်းတို့၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ တောင်းခံနေခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် အမှတ် (၃) အခြေခံပညာဦးစီး (အောက်မြန်မာပြည်) ၏ ညွှန်ကြားချက်အရဟုသာ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ပညာရေးဝန်ထမ်းတို့အား မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ တောင်းခံနေကြောင်း အတိအကျ မသိရသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လခန့်က ရန်ကုန်မြို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် (၅၅) နှစ် နှင့်အထက် ၀န်ထမ်း များစာရင်း ကောက်ခံခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုဝင်ဘာ ပထမပတ်တွင် ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံနှင့်အတူ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ ဖြည့်စွက်ကာ နေပြည်တော် အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနသို့ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ရကြောင်း သာသနာရေးဝန်ထမ်းများထံမှ သိရသည်။
ယခုလပိုင်းအတွင်း အသက် (၅၅) နှစ်အထက် ၀န်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူရမည် ဆိုသည့်သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေပြီး လုပ်သက် (၅) နှစ်အောက် ၀န်ထမ်းငယ်များ အင်အားလျှော့မည့်စာရင်းတွင် ပါဝင်သည်ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသဖြင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း တောင်းခံနေသည့်အပေါ် ပညာရေးဝန်ထမ်းများက သို့လော သို့လော ဖြစ်နေကြသည်။
“၅၅ နှစ်အထက်တွေ ပင်စင်ပေးလည်း တို့က ၀မ်းမနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုကလေးတွေ စာသင်နေတာ အလုပ်လုပ်ကြဖို့ မဟုတ်ဘူးလား။ အလုပ်ဝင်စမှာ အဲလိုတွေ ဖြုတ်နေရင် ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲ” ဟု ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးတဦးက သုံးသပ်သည်။
By WAI MOE Friday, November 20, 2009
The ceremony surprised many people in the human rights community because the junta is often cited as one of the world’s worst regimes in violating the rights of children. The army is regularly accused of conscripting child soldiers.
A non-binding resolution approved on Thursday by the UN Assembly’s Third Committee called on the Burmese government to end the recruitment of child soldiers and “to intensify measures to ensure the protection of children from armed conflict.”
The UN committee called on the junta to cooperate with the UN special representative for Children and Armed Conflict by granting access to areas where child soldiers are recruited.
According toareport by the US State Department: “Urban poor and street children in Rangoon and Mandalay are at risk of involuntary conscription as child soldiers by the Burmese junta. Thousands of children are forced to serve in Burma’s national army as desertions of men in the army rise. Some children were threatened with jail if they did not agree to join the army.”
The Burmese army has an estimated 70,000 child soldiers, one of the highest percentages in the world, according to rights’ groups. Some are as young as 11 years old. Non-state armed groups also recruit thousands of children as soldiers.
The exile-based Human Rights Education Institute of Burma (HREIB), which monitors children’s rights in the country, claimed that the junta recently used child soldiers in military offensives against ethnic minorities.
Inastatement on Nov. 9, the group said the military offensive by the regime in the Kokang area of northeastern Burma and Karen State underscored the gravity of the situation.
“Celebrating the convention on children’s rights means respecting child rights,” said Aung Myo Min, the coordinator of HREIB. “The event in Naypyidaw seems to beashowcase without meaning since the Burmese junta has failed to collaborate with the UN Security Council Working Group on Children and Armed Conflict for four years.”
He said that according to the International Labor Organization (ILO), the number of child soldiers in Burma is increasing.
Other abuses involving Burmese children occur in the areas of child labor, human trafficking, healthcare and education.
Independent researchers estimate that at least 20,000 Burmese children work in Thailand alone.
“Burmese children in Thailand are subjected to conditions of forced labor as hawkers, beggars, and for work in shops, agriculture, fish processing and other small-scale industries,” said the US State Department in its “Trafficking in Persons Report 2009.”
“Trafficking in girls for the purpose of prostitution persisted asamajor problem, particularly in urban areas. Burma is [also]adestination country for child sex tourism,” the report said.
အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်နယ်တွေအနက် ကမ္ဘာမှာ လူသိအများဆုံး ထဲမှာပါသလို အစဉ်အလာအရ စီးပွားရေး အင်အားကောင်း လာခဲ့တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာလိုငွေပြမှု အခက်အခဲတွေ ကြီးသည်ထက် ကြီးလာတာ ကြောင့် ပြည်နယ်တွင်း အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ကျောင်းလခကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း တိုးမြှင့်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်ကြတဲ့ ပြည်နယ်တလွှားက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက အကြီးအကျယ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် မြို့က ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Mike O'Sullivan ပေးပို့ထားတဲ့ သတင်းလွှာနဲ့အတူ အဲဒီမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတချို့ ရဲ့ အမြင်ကို နော်ရှိုးက တင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြည်နယ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးတွေ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် အစိုးရ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းလခ ၃၂% တိုးမြှင့်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရက မူသစ်ချမှတ် လိုက်တဲ့အပေါ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အကြီးအကျယ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
"အခုက World Street မှာရှိတဲ့ CEO တွေ၊ ဘဏ်တွေကိုကျတော အစိုးရက စီးပွားရေး ပိုကောင်းလာအောင် ငွေပေးတာ တွေ လုပ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော်တဲ့လူငယ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပိုပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေ၊ ပညာသင်နေတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်ကျတော့ မပေးဘူးဆိုတော့။ သမီးတို့လို လူငယ်တွေ အတွက်တော့ ဘယ်ကောင်းမှာလဲ။ အမေရိကား ဆိုတာ အရမ်းတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံလေ။ ကိုယ်ကျိုးစားရင် ကိုယ်ရတယ်။ အခုလို အစိုးအနေနဲ့ ဒီလိုလူတွေကို အားမပေးရင် ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးမလဲ။"
"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ UCLA ရဲ့ အဓိက Mission က ဘာလဲဆိုတော့ သူက public school ဖြစ်တယ်။ public education ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အဲဒီလို ဆင်းရဲတဲ့သူရော ချမ်းသာတဲ့သူရော တတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆိုတော့ ရှေ့လျှောက် ၃၂ % တိုးလိုက်လို့ရှိရင် နံပါတ် (၁) ကျောင်းသားတွေ အများစု တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နံပါတ် (၂) အဲဒီလိုမျိုး ကျောင်းသားတွေ အများစု မတတ်နိုင်တဲ့အခါ တက္ကသိုလ်က ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေ နည်းလာမယ်။"
အခုလို အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းလခ ၃၂ % တိုးမြှင့်မယ့် အစီအစဉ်ဟာ အဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့ အကောင်အထည် ဖော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလက စလို့ ကျောင်းလခကို တနှစ် ဒေါ်လာ ၈,၃၀၀ ကျော် ပေးရမှာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်လယ် လောက်ကစလို့ ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ကျော်အထိ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ စာရင် အများကြီး ဈေးသက်သာသေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ကယ်လီဖိုးနီးယား အစိုးရ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ကျောင်းလခထက်တော့ ၃ ဆလောက် ပိုများနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ် မြို့မှာုရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်တခုမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူ တယောက်ကလည်း အခုလို ကျောင်းလခ တိုးလိုက်တာဟာ ထင်သလောက်မဆိုးဘူး ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
အခုလို ကျောင်းလခ ၃၂ % တိုးလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် မိဘနှစ်ဦးပေါင်း ၀င်ငွေ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၇ သောင်းအောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ အရည်အချင်း ပြည့်မီရင် အစိုးရပညာသင် ထောက်ပံ့ငွေတွေ အလုံအလောက် ရနိုင်မှ ဖြစ်တယ်လို့ တက္ကသိုလ်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းလခ တိုးလိုက်တာကြောင့် ငွေမလောက်လို့ ပိတ်လိုက်ရတဲ့ အတန်းတွေကိုလည်း ပြန်ဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေ တော်တော်များများ ဟာလည်း လစာမဲ့ ခွင့်ရက်တွေ မယူမနေရ ယူခဲ့ရပါတယ်။ ပါမောက္ခတွေ စိုးရိမ်နေတာက တက္ကသိုလ် ပညာ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်မှာနဲ့ ကမ္ဘာ့ အတော်အတတ်ဆုံး ပါမောက္ခတွေ၊ သုတေသီတွေကို မဆွဲဆောင်နိုင်တော့မှာကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်မှုပြဿနာကနေ ရုန်းထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ လည်း ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေမှာလည်း နောက် ၁၈ လအတွင်း လိုငွေပြမှု ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂၁,၀၀၀ လောက် ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာအကဲဖြတ်သူတွေက သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
အမေ။ ။ သားရေအိပ်ရာထတော့ကွယ်၊ ကျောင်းချိန်နောက်ကျနေဦးမယ်။ ထ ....ထ
သား။ ။ ဟာ...အမေကလည်း သားကျောင်းမသွားချင်ဖူး၊
အမေ။ ။ သြော် .....သားရယ် ၊ ဒါပေမယ်. သားကျောင်းသွားရမယ်လေ၊ ထတော့
သား။ ။ ဒါဆိုသားကိုဘာကြောင်.ကျောင်းသွားရမယ်ဆိုတာပြော။
အမေ။ ။ ခက်တဲ.ကလေးပဲ။ သားကျောင်းတက်မှဖြစ်မှာပေါ.။
ခွန်းထောက် “အိုးဝေ” ညည်း။ ။
အဖြေ၊ ၊ ( )
အဖြေ၊ ။ ဥဒေါင်းဖိုမ။
နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၉
၄ - တန်း အောင်လက်မှတ် လာထုတ်လျှင်
ကွမ်းသီးအလုံး (၄၀) ယူခဲ့ကြပါ။
ကျောင်းရှေ့ကြေငြာသင်ပုန်းမှ ထိုစာသည် မိမိနှလုံးအိမ်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ခဲ့၏။ ထိုစာတွင် အဓိပ္ပါယ် များစွာ ပါဝင်နေသည်ဟုလည်း မြင်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ မြို့ကျောင်းများတွင် ဤကဲ့သို့အရေးအသားမျိုးကို ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ရေးကြ လိမ့်မည်မဟုတ်။ ရေးရဲကြလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်။ ယခုရေးသားထားပုံနှင့် အများမြင်သာအောင် ဖေါ်ပြထားပုံမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ။
မိမိတို့တွင် အလေ့အထတခုရှိ၏။ စစ်ကြောင်းရွာထဲဝင်ပြီဆိုသည်နှင့် ကျောင်း၊ ကျောင်းဆရာနှင့် ကျောင်း သားများမှာ မိမိတို့၏ရင်းနှီးရာ မိတ်ဆွေအရင်းအချာများ။ လည်ပတ်ရာ၊ ရင်ချင်းဆက်ရာများ။ မိမိတို့က ကျောင်းသား တပ်မတော် ဖြစ်နေသည်ကိုး။
ယခုလည်း ကေကောရွာသို့ရောက်သည်နှင့် RC ဘုရားကျောင်းအနီးက စာသင်ကျောင်းကလေးမှာ မိမိတို့ကို ကြိုဆို နေပြန်ပါပြီ။ ကျောင်းပိတ်ထားချိန်ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းရှေ့ဝရန်တာတွင် မိမိတို့ဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်။ ရွာဘက် သို့ လှမ်းကြည့် လိုက်စဉ် ကျောင်းရှေ့ဘောလုံးကွင်းနှင့် ရွာလေး၏ အနိမ့်အမြင့်အနေအထားကြောင့် အိမ်ခေါင်မိုးများ အဆင့်ဆင့် ဆက်စပ်တည်ရှိ နေပုံမြင်ကွင်းမှာ ပန်းချီကားတချပ်ကို မြင်လိုက်ရသည့်အလား။
မိမိတို့စစ်ကြောင်းမှာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ တပ်မဟာ(၂) နယ်မြေသို့သွားမည့်ခရီးစဉ်။ သို့ သော် ဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းမှာ ကရင်နီနယ်မြေဖြစ်နေ၍ KNPP စစ်ကြောင်းနှင့်ပူးပေါင်းလာရသည်။ ခရီးစဉ်တလျှောက်ရှိ ကရင်နီ ပြည်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားအသီးသီး၏ ဘ၀များကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာ မိမိတို့အတွက် အသစ်အ ဆန်းချည်းသာ။
ရွာများကို တောင်ကုန်းအပေါ်တွင်သာ တည်ထားလေ့ရှိသဖြင့် ရေရှိရာအရပ်နှင့်မနီးခြင်း။ ရွာရှိအိမ်များမှာ တအိမ်လုံး တံခါးပေါက်တပေါက်သာရှိ၍ အလုံပိတ်ဖြစ်သည့် အလင်းအားနည်းနည်းတည်ဆောက်မှုဖြစ်နေခြင်း။ ရွာများတွင် အိမ်သာဟု သတ်သတ်မှတ်မှတ်မထားကြပဲ ရွာအပြင်တွင်သာသွားကြ၍ ရွာမရောက်မီအဝေးကပင် အနံ့ အသက်များက ကြိုဆိုနေခြင်း။ အိုးခွက်ပန်းကန်များမှာ ဆေးကြောသည့်အလေ့အထ အားနည်းခြင်းကြောင့် ညစ်ပေ နေခြင်းနှင့် အချို့ရွာများတွင် ပန်းကန်၊ ဒေါင်းလန်းပုံစံ ခြေထောက်ပါသော ဗန်းကြီးများတွင် ထည့်စားကြ၍၊ လူစားပြီး ခွေးများကို ထိုပန်းကန်၊ ဗန်းများဖြင့်ပင် ပေးစား လေ့ရှိခြင်းများမှာ မိမိတို့အတွက် သတိမူမိစရာများဖြစ်နေသည်။ ခြုံပြောရလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကို မျက်ကွယ်ပြု ထားရလောက်အောင် ဘ၀ကြမ်းကြမ်းများကို ဖြတ် သန်းနေကြရသည့် ပကတိအခြေအနေများပင်။
ခရီးစဉ်တလျှောက် အဖြစ်အပျက်များတွင် ရင်ထဲစွဲလောက်အောင် အမှတ်တရလေးတွေလည်းရှိ၏။ တခုက နယ်စပ်နှင့် သံလွင်မြစ်ကြားမှအဖြစ်အပျက်။ ရွာတရွာ တွင် စခန်းချထားစဉ်။ မိမိနှင့်တအိမ်ထဲအတူတည်းသော ကိုမင်းဝေ တယောက် မနက်စောစော အိမ်ပေါ်သို့ အူယားဖားယားပြေးတက်လာပြီး … ။
“ကိုလူဗိုလ်ရေ ပွဲပဲဗျို့။ ကျနော်ဗျာ ၀မ်းတအားသွားချင်လို့ အိမ်သာလိုက်ရှာတာ၊ ဘယ်နားမှာမှမတွေ့လို့ ရွာ ပြင်ကို ထွက်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ မလင်းတလင်းမို့ ကြောက်စိတ်ဝင်နေရတဲ့အထဲ၊ နောက်ဖက်က အသံကြားလို့ လှည့် ကြည့်လိုက်တော့ … ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ၀က်တအုပ်လေ ကျနော့်နောက်မှာဝိုင်းနေကြတယ်။ ၀က်တွေကလည်း ရဲလိုက်ကြတာဗျာ။ လူကိုဝင်ဆွဲမတတ် အနားထိကိုကပ်လာတာ။ ဆက်မနေရဲတော့လို့ကို ပြေးခဲ့ရတာဗျို့။”
ဟုတ်ပါသည်။ ဒီအဖြစ်မျိုးကို ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး တယောက်မဟုတ်တယောက် ကြုံခဲ့ကြရသည်။ လေ့လာရေး မျက်လုံးဖြင့် စူးစမ်းကြည့်မိမှ သိလိုက်ရသည်က ဤဒေသတွင် ၀က်များကို မွေးကြသော်လည်း အစာကျွေး ရိုးထုံးစံမရှိ။ ၀က်များမှာ သင့်တော်ရာ စားသောက်ကြရင်းဖြင့် အသက်ရှင်နေကြရပုံပေါ်သည်။ ကိုမင်းဝေလိုအဖြစ်မျိုးမှာ ၀က်များအတွက်အစာလာကျွေးသည့် အနေအထားဖြစ်နေသဖြင့် အလုအယက်ဝိုင်းအုံလာကြခြင်းသာ။ ၀က်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာလည်း မြို့ဝက်များနှင့်လည်းမတူ၊ တောဝက်များနှင့်လည်းမတူ၊ ခန¨ာကိုယ်များမှာ ခွေးများကဲ့သို့ ပိန်ပိန်ပါး ပါးလေး။
နောက်ထပ်အဖြစ်တခုကတော့ ပထမအဖြစ်အပျက်၏အဆက်ဟုပင်ဆိုရမလိုလို။ မိမိတို့တွင် ဆေးဝါးများပိုပို လျှံလျှံပါလာ၏။ သို့အတွက် ရွာများကိုရောက်တိုင်း ကျန်းမာရေးပညာပေးစကားများပြောရင်း ရွာရှိလူနာများကို ဆေး ကုပေးလေ့ရှိသည်။ ဒီလိုနှင့်ရွာတရွာအရောက် ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုစကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးပညာ ပေးစကားများပြောအပြီး၊ မြို့ရောက်ဖူး ၍ ဗမာရည်လည်သောရွာသားတဦးမှ ထရပ်ကာ … ။
“ကျနော်တို့ရွာတွေမှာ အိမ်သာမရှိတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနပြောသလို ရောဂါရတယ်ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဘာလို့လည်းဆိုရင် မြို့မှာအိမ်သာတွေ အိမ်တိုင်းရှိကြပေမယ့် ဆေးရုံမှာ လူနာတွေအပြည့်ပဲလေ။ ကျနော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့လူနာက နဲနဲလေး”
“နောက်တခုက မြို့မှာအိမ်သာတွေရှိပေမယ့် လူတင်မကဘူး၊ ၀က်နာ၊ ကြက်နာ၊ ခွေးနာတွေပါဖြစ်ကြတယ် ကျနော်တို့ ဆီမှာ တခါမှ ဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး”
ကျနော်တို့အားလုံး ပြန်ရှင်းပြဖို့ပင် ဆွံ့အခဲ့ကြရသည်။ အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြဖို့လိုသော်လည်း အချိန်ကိုငဲ့ ကွက်၍ မရှင်းပြ ဖြစ်ခဲ့။ သို့သော် ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ထိုလူ၏စကာများမှာကား၊ မိမိတို့နှင့်အတူ ပါလာနိုင်လောက် အောင်ကို အမှတ်တရ။
“ဒီလမ်းလေးအတိုင်းဆင်းသွား။ ရေခပ်ဆိပ်ဘေးနားက ခြေတံရှည်ရှည်နဲ့အိမ်က ဆရာကြီးအိမ်ပဲ”
ရွာသားများ၏ အဆင့်ဆင့်လမ်းညွန်မှုများအရ ကျောင်းအုပ်ကြီးအိမ်သို့ မိမိတို့ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အပြန် အလှန် မိတ်ဆက် ကြပြီး စကားလက်ဆုံကျမိရာမှ ဆရာကြီးနှင့်မိမိတို့ တသားတည်းဖြစ်သွား၏။ ဘာသာစကား တ ထပ်တည်း ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုရမည်ထင်သည်။
“နှစ်တိုင်းတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ (၂)ယောက်၊ (၂)ယောက် ရောက်လာကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာ ပါဘူး။ အမေဘာဖြစ်လို့၊ အဖေဘာဖြစ်လို့နဲ့ အကြောင်းပြပြီး ပြန်ပြန်သွားကြတာ ဒီမှာတော့ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီရွာမှာက အစား အသောက်၊ အနေအထိုင်က အစစဆင်းရဲတယ်မဟုတ်လား။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်တယောက် တည်းပဲ ကျောင်းတကျောင်း လုံးကို တာဝန်ယူရပြန်တာပေါ့။”
“ကျနော်လည်း နိုင်သလောက်တော့ တာဝန်ကျေအောင်ကြိုးစားပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တယောက်တည်းနဲ့ တကျောင်းလုံး ကို ဘယ်လိုမှ နိုင်နိုင်နင်းနင်းမသင်နိုင်ဘူးလေ။ အခုလို အသက်အရွယ်လည်းရ၊ သားသမီးတွေလည်း များလာတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့”
“ရွာကလူကြီးတွေနဲ့ father ဆီမှာ ကျနော် ခဏခဏတောင်းထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးတောင်း ပန်ကြ တော့လည်း အားနာရပြန်ရော။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၀ါသနာကရှိတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ မထွက်ရက်ဘူး ဗျာ။ ငါမရှိရင် ကျောင်း ရှိတော့ပါ့မလားလို့ တွေးပူနေရင်းက အခုဆို ကျောင်းဆရာသက်တမ်း အနှစ် (၂၀)ကျော်ပြီ”
ဆရာကြီးတပည့်များတွင်တချို့မှာ ဘွဲ့ရများပင်ရှိနေကြပြီ၊ အထက်တန်းအဆင့်လောက် တပည့်များမှာလည်း အများ အပြား။ တချို့မှာ မြို့ပေါ်ရောက်ကုန်၍ တချို့မှာ ဒီရွာထဲတွင်ပင် ရှိနေကြသည်။ သို့သော် ကျောင်းဆရာ အလုပ်ကိုကား မည်သူမျှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဟုလည်း သိရ၏။
ဟုတ်တော့လည်း အဟုတ်သား။ ဒီလိုဒေသမျိုးတွင် ကျောင်းဆရာရှိဖို့လိုသည်ကို အားလုံးလိုလိုက လက်ခံ ထားကြ သော်လည်း ကျောင်းဆရာအလုပ်မှာကား အပင်ပန်းဆုံးနှင့် ၀င်ငွေအနည်းဆုံးမို့ လုပ်မည့်သူမရှိ။ ပညာ အသင့် အတင့်တတ် လာလျှင်ပင် အရပ်ဆေးဆရာ၊ အရောင်းအ၀ယ်သမားနှင့် ဈေးဆိုင်ထောင်ခြင်းတို့လောက်သာ စိတ်ဝင် စားကြသည်။ ယင်းအလုပ်များက ၀င်ငွေကောင်းကြသည်ကိုး။
ဆရာကြီးဦးစောထူးမှာ ကရင်ပီသစွာ ရိုးသားပွင့်လင်း၏။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆိုသော်လည့်း ထည်ထည်ဝါ၀ါမရှိ။ မာန ဟူ၍မတွေ့ရ။ မိသားစု (၇)ယောက် တာဝန်ကို အောက်ခြေအလုပ်များမှစ၍ တာဝန်ကျေသူလည်းဖြစ်သည်။ မိမိ တို့နှင့် စကား ပြောနေရင်းနှင့်ပင် ၀က်စာကျွေးခြင်းကိစ္စ၊ ကလေးထိန်းခြင်းကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်နေသည့်အပြင် ပလိုင်း တလုံးကိုပင် ရက် နေသေး၏။ အိမ်အောက်တွင် လုပ်စရာရှိသည်များကို ဆင်းလုပ်လိုက်၊ စကားပြန်ပြောလိုက်၊ ပလိုင်း ရက်လိုက်၊ နှီးဖြာလိုက်၊ ဆေးတံမီးညှိလိုက်၊ ဖွာလိုက်။
ဆရာကြီးကိုကြည့်ရသည်မှာ ကွမ်းကိုလည်း အလွန်ကြိုက်ပုံရသည်။ သူ့သွားများမှာ စစ်စီးရောင်တင်ထား သည့်အလား။ ပါးစပ်ထဲတွင်လည်း ကွမ်းကမပြတ်။ ထို့ကြောင့်ပင် အောင်လက်မှတ်အတွက် ကွမ်းသီးအလုံး(၄၀) ဟု ရေးထားခြင်းဖြစ်မည်။
“ကျနော်လည်း ဒီရွာက ကလေးတွေအတွက် တာဝန်ကျေချင်လို့၊ ၀ါသနာပါလွန်းလို့သာ စာသင်နေရတာပါ။ မိသားစု များလာလေလေ ရပ်တည်ရခက်လေလေပါပဲ။ ကျောင်းဆရာအလုပ်က အချိန်ပြည့်ဆိုတော့ တောင်ယာလည်း မခုတ်နိုင်၊ ခြံလည်း မလုပ်နိုင်။ ရွာကကျောင်းသားမိဘတွေ ၀ိုင်းကြည့်ကြလို့သာ ခံသာတာပေါ့။ ကျနော့်ကျောင်းဆရာ လစာက ဒီမောဆိုးမှာ ကျောင်း သွားတက်နေတဲ့ ကျနော့်သားရဲ့ ကျောင်းစရိတ်ဖိုးတောင် မရှိပါဘူးဗျာ။ ကျနော့်သား ကြီးနဲ့ သမီးတယောက်ကလည်းလွိုင်ကော်မှာ ကျောင်းသွားတက်နေတယ်လေ။ သူတို့အတွက်တော့ ဘာသာရေး (ဘုန်းတော်ကြီး)က တာဝန်ယူထားလို့ တော်သေးတယ်”
ဆရာကြီးက ကျနော်တို့သွားလည်တိုင်း ခေါင်ရည်နှင့်ဧည့်ခံလေ့ရှိ၏။ ၀ါးဗူးထဲတွင် ပြောင်းကောက်များကို ထည့်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ထားသည်မသိ။ သောက်ခါနီးမှ ရေနွေးလောင်းထည့်၍ ပိုက်ဖြင့်စုပ်သောက်ရသော ခေါင်ရည် မျိုးဖြစ်သည်။ ခေါင်တဗူးထဲကို တယောက်တလှည့် အလှည့်ကျ စုပ်သောက်ကြလေ့ရှိသည်။ ရေခမ်းသွားလျှင် ရေနွေး ပြန်ထည့်၍ သောက်နိုင် သည်။ အရသာက တော်တော်နှင့်မပျယ်သွား။ သောက်၍ အတော်ကောင်းသည်။ ကျနော် ဆိုလျှင် ရေနွေးတခါထည့်ခေါင်ရည် တအိုးတည်းနှင့်ပင် ခေါင်းထဲ ရီဝေေ၀။
“ကျနော်လည်း ကလေးတွေကို စာသင်ရတာ အားမရပါဘူးဗျာ။ ကလေးတွေလည်း ကောင်းကောင်းရသွား ကြမယ် မထင်ဘူး။ တယောက်ထဲ ဟိုအတန်းပြေးသင်လိုက်၊ ဒီအတန်းပြေးသင်လိုက်နဲ့ဆိုတော့။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံ အရ တော်တဲ့ ကျောင်းသားအကြီးတွေရဲ့ အကူအညီကို သင်ကြားရေးမှာထည့်သုံးထားလို့ သက်သာတာ။ အတန်း အလိုက် မော်နီတာထားပြီး ထိမ်းခိုင်းတာတို့၊ စာခေါ်ခိုင်းတာတို့လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ စာစစ်ပြီဆိုရင်လည်း ကျနော်ကိုယ် တိုင်မစစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ကျောင်းသားအချင်းချင်းပဲ အပြန်အလှန် စစ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်။ ဒါက ပိုပြီးထိရောက် တယ်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်လည်းရေးရ၊ စစ်လည်း စစ်ရတော့ ကလေးတွေ အလေ့အကျင့်ပိုရသွားကြတာပေါ့။ ကျနော်က ပုံစံကျလာအောင်၊ ပြီးစလွယ်မဖြစ်အောင်၊ မလုပ်ပဲ မနေရအောင်လောက်ပဲ ထ်ိမ်းပေးရတယ်လေ”
ကျနော်တို့ကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရခြင်းက ဆရာကြီးအတွက် အာဟာရဖြစ်နေပုံပေါ်သည်။ ဆရာကြီးကတော်၏ အပြောအရ ကျနော်တို့နဲ့စကားပြောဖြစ်မှ ခေါင်ရည်နှင့်ကွမ်းစားနှုန်း ခါတိုင်းထက် ကျသွားကြောင်းသိရသည်။
“တခါတခါလည်း ကျနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ။ ကျနော့်ကျောင်းက ကလေးတွေ မြို့ကျောင်းတွေမှာ သွားတက်ရင် ပထမစစချင်း တနှစ်မှာ စာမေးပွဲကျကြတာများတယ်ဗျ။ ကျနော်တယောက်တည်း မနိုင်မနင်းသင်လိုက် ရတာအပြင်၊ ဒီမှာက စာသင်ရင် ဒေသခံစကားနဲ့ပဲရှင်းပြရတော့ မြို့ရောက်ရင် ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့။ ဒီရွာမှာက ကေကောစကားနဲ့ပဲ ပြောကြတာ။ ကလေးတွေက ဗမာစကားမတတ်ကြဘူးလေ”
ကျနော့်မှာ ဆရာကြီး၏ခံစားချက်တွေကို တနင့်တပိုးရလိုက်သည်။ ဆရာကြီးအပေါ်လည်း စာနာသွားမိ၏။ ကျောင်းသား လေးတွေအတွက်လည်း စိတ်မကောင်း။ သူတို့က သူတို့ရွာမှာ စာတော်နိုင်ကြသော်လည်း မြို့ကျောင်း ရောက်သည်နှင့် ဘာသာ စကားအခက်အခဲကြောင့် စာမလိုက်နိုင်ဖြစ်ကြရသည့်အတွက်…။ မည်သို့သော နည်းများဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်ကို မိမိ တွေးမဆုံး နိုင်အောင်ဖြစ်နေမိ၏။
“ဆရာကြီးရယ် ဒီအခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရရင်ကောင်းမလဲဗျာ။”
ဒီကိစ္စက ကျနော့်အတွက် စိတ်ပင်ပန်းလွမ်းအားကြီး၍ မေးလိုက်မိသည်။
“ကျနော်လည်း ဒီကိစ္စကို အမြဲတမ်းတွေးနေတာပါပဲ။ ဒီလိုဗျ။ ဟိုတနေ့ကပြောသလို မြို့ကဆရာ၊ ဆရာမ တွေရောက် လာကြတယ်။ ရောက်စတော့ ဒီရွာကစကားကိုမတတ်ကြဘူး။ အနေကြာတော့ တတ်လာကြပြီး၊ ဒီရွာက စကားနဲ့ပဲပြော၊ ဒီရွာက စကားနဲ့ပဲသင်လာကြတယ်လေ။ ဆရာတွေကပဲ ဒီရွာကစကားကို တတ်တတ်သွားကြပြီး ကလေးတွေက ဗမာလိုမတတ်ကြတော့ဘူး၊ အရင်လိုဒုံရင်းပဲ။”
“အဲဒီတော့ ဒီရွာကစကားကို မသင်ပဲ၊ မပြောပဲ တောင့်ခံနိုင်မယ့်၊ ဗမာ့စကားနဲ့ပဲသင်ပေးမယ့် ကျောင်းဆရာ တွေရှိ လာရင်၊ အခု ကျနော့်ကျောင်းသားတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကို တစုံတရာဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံ တယ်ဗျာ။ အနည်းဆုံး၊ အထောက်အပံ့တော့ ရနိုင်မယ်လေ။ ခုက ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကရင်ဖြစ်ပေမယ့် ကေကော စကားနဲ့ပဲ စာသင်ပေးနေရတာ။ ကျနော်လည်း ဗမာလို သိပ်မတတ်ဘူး။ ကလေးတွေက မြန်မာစာကိုတောင် ကြက်တူး ရွေးလို အလွတ်ကျက်နေရတာလေ။ အဓိပ္ပါယ် နားလည်ကြတာမဟုတ်ဘူး။”
ဆရာကြီးလည်း စကားပြောရတာ အတော်မောသွားပုံပေါက်၏။ ခေါင်ဗူးထဲကို ရေနွေးအသစ်ဖြည့်ကာ အားရပါးရ စုပ် သောက်နေပါတော့သည်။ သူတခါတခါသောက်သည်မှာ ကျနော်တို့ ၃ ၊ ၄ ခါ စုပ်လောက်နှင့် ညီမျှနိုင်သည်။ ရုတ်တရက် စုပ်သောက်နေရာက ခေါင်းထောင်လာကာ …
“ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့ထဲမှာ ကျောင်းဆရာဝါသနာပါတဲ့လူ မရှိဘူးလားဗျာ။ ကျနော်တို့ရွာအတွက်၊ ကျနော်တို့ ကလေးတွေ အတွက် ကူညီပေးကြပါလား။ ခင်ဗျားတို့လို ပညာတတ်တွေသာ ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို ၀ါသနာပါပြီး လုပ်ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။”
အခြားသူများတော့မသိ။ ကျနော်တော့ ဆရာကြီး၏စကားကြောင့် ခေါင်ရည်အမူးလေးပင် ပြေသွား၏။ ဆရာကြီး၏ အမေးကို မည်သို့ဖြေရမည်ကိုပင် စဉ်းစားမရ … ။
“ကျနော်ဒီရွာမှာ နေခဲ့တော့မယ် ကိုသန်းကျော်ဌေး။ ကျနော်ကျောင်းဆရာလုပ်တော့မယ်။”
ကိုသန်းကျော်ဌေးမှာ ကျနော်တို့အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ပရဟိတစိတ်ရှိသူလည်းဖြစ် သည်။ ကျနော်စကားအပေါ် သူနားလည်နိုင်မည်ဟုယူဆ၍ လိုရင်းကိုဒဲ့ပြောလိုက်သည်။
“ဒီအလုပ်က ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ ကိုလူဗိုလ်ရယ်။ နောက်ပြီး ဆရာကြီးပြောပြချက်အရဆိုရင် ဒီရွာအတွက် တကယ့် လိုအပ်ချက်လည်း ဖြစ်နေတာပဲဗျာ။ ခင်ဗျားခံနိုင်ရည်ရှိဖို့နဲ့ သေချာဖို့ပဲလိုတာ။ ကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံး ကျနော် တာဝန်ယူတယ်။ လေးစားပါတယ် ရဲဘော်။”
ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းကြီး ခရီးဆက်ကြပါပြီ။ ကျနော်တယောက်တည်းသာ ရွာမှာကျန်ရစ်ခဲ့၏။ သို့ပေမယ့် အားငယ်စရာ မရှိ။ ဖာသာလူးဝီစ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ရွာသူရွာသားအားလုံးက ကျနော်ကို ၀ိုင်းရံပေးသွားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်သည်။ အထူး သဖြင့် လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်တခုကို မိမိရရဖြည့်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မိ၍ လည်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းပြန်မဖွင့်သေးပေမယ့် ကျောင်းလေးကိုနေ့တိုင်းလိုလို ကျနော်ရောက်၏။ ကျောင်းတွင်းကျောင်းပြင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရန်ရည်ရွယ်၍။ ဒီရွာကိုရောက်စ၊ ဒီကျောင်းရှေ့မှာ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေ ထိုင်ခဲ့ကြတာကို ပြန်မြင် ယောင် မိသေးသည်။
အင်း … အဲဒီတုန်းက ဒီကြေငြာသင်ပုန်းကစာဟာ ကျနော့်ကျောင်းဆရာဘ၀ဖြစ်တည်မှုကို အစပြုစေလိမ့် မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိတာ အမှန် … ။ ။
၂၂ နှစ်ပြည့် ABSDF မွေးနေ့အမှတ်တရ
အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူများ မွန်ဝတ်စုံဖြင့် လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့သည်
Fri 13 Nov 2009, မင်းအာသံ
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးနေသော မွန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူများ သည် လွန်ခဲ့သော ရက် သတ္တပတ်က မွန်ဝတ်စုံဖြင့် လေ့လာရေးခရီးစဉ် ထွက်ခဲ့ကြသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူးများသည် ၄င်းတို့၏ အဝေးသင်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ် ကော့နှတ်ကျေးရွာရှိ ဦးနာအောက်ဘုရားသို့ ခရီး ထွက်ခဲ့သည်။ လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ရာတွင် မွန်ကျောင်းသား/သူ အချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိသွားရန်နှင့် ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်ထားသည်ဟု ဦးဆောင်သွားခဲ့သော မွန် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီလိုမျိုးလေ့လာရေးခရီးထွက်တာ ပထမအကြိမ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အစက ကျနော်တို့ အယောက် ၃၀-၄၀ လောက်ပဲ စီစဉ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားချင်တဲ့လူက များတော့ အယောက် ၁၈၀ ကျော်သွားတယ်။ ကျနော်တို့အခုလို စီစဉ်တာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးခင်မင်မှု ရှိသွားစေချင်တာရယ် မွန်ကျောင်းသား/သူ တွေအကြားမှာ စည်းရုံးရေး တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သွားတယ်”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယင်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်မထွက်မှီ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက ပါမောက္ခချူပ်ထံတွင် သွားရောက် အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် “တကယ်လို ကျနော်တို့ လေ့လားရေးခရီးထွက်ရင် ပါမောက္ခချူပ် တားလည်း မတားဆီးပါဘူး၊ သွားခွင့်လည်း မပြုခဲ့။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ လမ်းမှာ ပြသနာတစ်ရပ် ပေါ်လာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ရှင်းယူပြီး ပါမောက္ခချူပ်မှ တာဝန်မခံပေ” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောပါသည်။
ထိုကော့နှတ်ကျေးရွာရောက်သည့်အခါ ဘုန်းတော်ကြီးက လက်ဖက်ရည်နှင့် ကြိုဆိုခဲ့ပြီးနောက် မွန်ကျောင်းသား/သူများကို ဦးနာအောက်အကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတွင် ကျောင်းသား/သူများက ဂိမ်းကစား ခဲ့ရာ အလွန်ပင် ပျော်ရွင်မှုရရှိခဲ့သည်ဟု လိုက်ပါသွားသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဒီခရီးစဉ်အတွက် တစ်ယောက်ကို ကျပ် ၃၀၀၀ လောက်ပဲပေးရတယ်၊ ပျော်လည်းပျော်တယ်။ နယ်အသီးသီး ကနေလာတဲ့ မွန်ကျောင်းသား/သူကိုလည်း ခင်သွားတော့ ဒီခရီးစဉ်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် မမေ့နိုင်လောက် အောင် ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး အခုလိုလုပ်တာ မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ အင်အားတစ်ရပ်လည်းဖြစ်တယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
လိုက်ပါသွားသည့် ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ “ခရီးစဉ်မှာ ကျနော်ဘက်ကနေ တတ်နိုင် သလောက်တော့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်။ သူတို့အတွက် အိမ်မပြန်မှီ အမှတ်တရလည်း ဖြစ်သွားအောင် လိပ်စာ-စာအုပ် စီစဉ်ပြီး ထုတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်၊ သဘောလည်းကျတယ်”ဟု ၄င်းက ပြော သည်။
ယခုကဲသို့ ကော့နှတ်ကျေးရွာမှာ ရွေးပြီး လေ့လာရေးခရီးစဉ် ထွက်ခဲ့သည့်အကြောင်းသည် ကော့နှတ်ရွာသည် ၁၉ ရာစုတွင် ကျော်ဇောထင်ရှားခဲ့သော ကောင်းမှုပုညရှင်ကြီးဖြစ်သော သစ်ကုန်သည်၊ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်၊ ဧရာဝတီ သင်္ဘော ကုမ္ပဏီနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော မြန်မာပြည် မီးသင်္ဘောသူဋ္ဌေးကြီး၊ မွန်ဘုရားဒကာ သူဌေးကြီး ဦးနာအောက် နေထိုင်ခဲ့သော သာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားရာ ကျေးရွာအဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။
စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခွင့်မရသဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာသင်ရန်ခက်ခဲ
Submitted by Karen Information Center on November 13, 2009 – 4:15 am
အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်။ (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ထာ့ဆောင်ယန်းမြို့နယ် နိုဘိုးကျေးရွာအတွင်းရှိ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦး ပြင် ဆင်ခွင့် မရသည့်အတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသား စာသင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေပြီး ယခုချိန်တွင် ကျောင်းကို ပိတ်ထားရသည် ဟု ကျောင်းဆရာတဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
အလယ်တန်းအထိ ဖွင့်လှစ်ထား အဆိုပါကျောင်းသည် ပထမအစမ်းစာမေးပွဲဖြေပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အား လပ်ရက်အနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၆ရက်မှစ၍ နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့အထိ ကျောင်းကို ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ထိုကျောင်းပိတ်ရက် အတောအတွင်း ကျောင်းအမိုးအကာများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လုပ်ဆောင်နေစဉ် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ လာရောက်တားမြစ်ခဲ့ သဖြင့် ယခုအချိန်ထိ ကျောင်းကို ပြန်မဖွင့်နိုင်ဘဲ ပိတ်ထားရသည်ဟု ကျောင်းဆရာ စောဂျစ်ပစီက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
သူက “ကျနော်တို့ကျောင်းဟာ အစကတည်းက တာလာပါ့အမိုးနဲ့ပဲ မိုးထားတယ်ဆိုတော့ အခုနွေမှာ နေက အရမ်းပူလာပြီ လေ။ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားမိဘတွေက ကျောင်းကို နည်းနည်းလေး ပြန်ပြင်ပြီးတော့ ဖက်နဲ့ပြန်မိုးဖို့ လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမှာရှိတဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပေးဘူး။ သူတို့က(ထိုင်းအာဏာ) ပြင်စရာမလိုတော့ဘူး၊ နင်တို့မကြာ ခင် ပြောင်းရတော့မယ်လို့ ဒီလ ၈ရက်နေ့မှာ လာပြောသွားတယ်။ ကျောင်းက ဒီလ ၂ရက်နေ့မှာ ပြန်ဖွင့်ရမယ်ဆိုပေမယ့်ကျောင်းအမိုး အကာ မပြည့်မစုံတဲ့အနေအထားမှာ နေပူကျဲကျဲထဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုလုပ် စာသင်လို့ရမှာလဲ”ဟု ဆို သည်။
ထို့အပြင် “အာဏာပိုင်တွေကတော့ ကလေးတွေ စာမသင်ရဘူးလို့တော့ မပြောပေမယ့် အခုလိုမျိုး စာသင်ကျောင်း အမိုးအ ကာ တဝက်တပျက်နဲ့ဆို ကလေးတွေ စာသင်လို့မရတော့ဘူးလို့ ထင်မှာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တပတ်မှာ ကျနော်တို့ ကလေး တွေ စာသင်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ အိမ်မှာပဲ ကလေးတွေကို စုပြီးတော့ စာသင်ပေးမယ်။ ကျောင်းတက်တဲ့ ပုံစံ တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျူရှင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့၊ တနေ့ကို သင်ခန်းစာ နည်းနည်းလေးလောက် သင်သွားမယ်၊ သူတို့ (ထိုင်းအာဏာ ပိုင်)တွေကိုတော့ ကျနော်တို့ အသိပေးရမယ်။ သူတို့ခွင့်မပြုရင်တော့ မသင်ရဘူးပေါ့။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် အရမ်းနစ်နာတယ်”ဟု ဆရာစောဂျစ်ပစီက ပြောဆိုသွားသည်။
နိုဘိုးယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ရှိ အဆိုပါကျောင်းတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ (၂၂၄)ဦးနှင့် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ (၁၆)ဦးရှိပြီး အတန်းပညာအားဖြင့် အတန်းငယ် KGမှ (၇)တန်းအထိ ရှိသည်။
ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက စခန်းအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များကို နေ့တိုင်းလိုလို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးလျှက်ရှိပြီး ယခုလ (၄)ရက်နေ့က ထိုဒေသအတွင်းရှိ ထိုင်း(တောချောဒေါ)စစ်သား၊ ရဲများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက စခန်းတာ ဝန်ရှိသူများနှင့် ကျောင်းဆရာအချို့ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုများ လုပ်ဆောင်သည့်အပြင် နိုဘိုးရွာသားအချို့၏ နေအိမ်များကို လည်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များအား ကေအိုင်စီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဆက် သွယ်၍ မရပါ။
အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ထဆောင်ယမ်းမြို့နယ် အူးသူးထာ့ဒေသအတွင်းရှိ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွင်လည်း ယခုလ ၄ရက်နေ့မှ စ၍ သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက စခန်းအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များအား နိုဘိုးယာယီစခန်းအတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ရန် လူဦးရေစာရင်းများ လာရောက်ကောက်ခံနေကြောင်း အူးသူးထာ့စခန်းကော်မတီဝင်တဦးက ကေအိုင်စီကို ယခုလို ပြောသည်။
သူက “အူးသူးထာ့မှာတော့ ကလေးတွေက ကျောင်းပုံမှန်တက်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလ ၄ရက်နေ့ကစပြီးတော့ ၃-၄ရက် ဆက်တိုက် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက စခန်းထဲမှာလာပြီးတော့ စခန်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် ဒုက္ခသည်တွေ နိုဘိုးဘက်ကို ပြောင်း မလား။ ရွာကိုပြန်မလားပေါ့၊ ရွာကိုပြန်မယ့်လူ ဘယ်နှစ်ယောက်၊ နိုဘိုးဘက် ပြောင်းမယ့်လူ ဘယ်နှစ်ယောက် သူတို့စီကို စာရင်းလာသွင်းပါလို့ ပြောလာတယ်။ ရွာသားတွေ တယောက်မှ စာရင်းမသွားပေးကြဘူး။ ရွာသားတွေက ကျနော်တို့ကို အချိန် တလနှစ်လလောက် စောင့်ပေးပါ။ အခြေအနေကောင်းလာရင် ရွာကိုပဲပြန်ချင်တယ်လို့ တောင်းပန်တော့ သူတို့(ထိုင်း အာဏာပိုင်)ကလည်း အတင်းအကြပ်မလုပ်ဘူး”ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များသည် ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံခရိုင်အတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြပြီး လွန်ခဲ့သည့် ဇွန် လက ထိုဒေသရှိ ကေအဲန်အယ်လ်အေတပ်ဖွဲ့များကို နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့က ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာ စဉ် အိုးအိမ်များကို စွန့်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ထဆောင်ယမ်းမြို့ နယ်အတွင်းရှိ နိုဘိုး၊ မဲ့သရီနှင့် အူးသူးထာ့ဒေသအတွင်း ယာယီစခန်းဖွင့်ကာ ခိုလှုံခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေအနုပညာ နယ်ပယ်များ သာမက ဘဲ ပညာရေးနယ်ပယ်ကိုလည်း ရိုက်ခတ်လျက်ရှိပါတယ်။ နမူနာ ပြရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည် စာသင်ကျောင်းများမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ကျောင်းသုံး စာအုပ်များကို ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်များရဲ့ ပညာရေးဟာ နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေ၊ အရောင်ဆိုးမှုတွေ မရှိရဘူးဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည် ကျောင်းသုံး စာအုပ်များ၊ ပြဋ္ဌာန်းစာများမှာတော့ ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ၊ ပြောင်းလဲတဲ့ ခေတ်စနစ်ပေါ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အာဏာရှင်တွေ အပေါ်မှာလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေရပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးဥပမာ ပြရမယ်ဆိုရင် မဆလ လို့ အလွယ်တကူ ခေါ်နေတဲ့ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက် အခြေခံပညာ အထက်တန်းမှာ စီးပွားရေးဘာသာရပ် သင်ကြားတဲ့အခါ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေး ကိုပဲ ဦးတည်သင်ကြားစေခဲ့သလို မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ အညမညသဘောတရား အစရှိတဲ့ ဆိုရှယ်လစ် သဘောတရား တွေကို နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ပြဋ္ဌာန်းစာတွေမှာ သဘောတရား ရေးရာတွေကို သိအောင်၊ ယှဉ်တွဲလေ့လာနိုင်အောင် သင်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဒီစနစ်က ကောင်းတယ်၊ တခြားစနစ်တွေက မကောင်းဘူး လို့ တဖက်သတ်ကောက်ချက်ချပြီး ကျက်စာအဖြစ် သင်ကြားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခု လက်ရှိစစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ မသင့်မြတ်တဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံမကောင်းကြောင်း ရေးထား တဲ့ သမိုင်းစာအုပ်ကို ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေဟာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေပေါ်မှာ သက်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲက ဖြုတ်ပစ်တဲ့ သင်ရိုးတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဥပမာဆိုရရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေကနေ ထုတ်ပယ်ပစ် တဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ကဗျာတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဆောင်းပါးတို့ကို ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့ သင်္ကေတတွေ၊ တော်လှန်ရေးရဲ့ ပြယုဂ်တွေ ဖြစ်နေလို့ သူတို့ အမည်၊ သူတို့အကြောင်းကို အထက်တန်းကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲ မရောက်အောင် ကာကွယ်တဲ့သဘော လုပ်လိုက်တာလို့ ယူဆမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေမှာ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ချင်တဲ့ သူပုန်စိတ်တွေ မပေါ်အောင် အထက်တန်း အဆင့်မှာကတည်းက ကြိုတင်ပိတ်ဆို့တဲ့သဘောတွေလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ စာပေတွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄ဝ လောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေးသားခဲ့တဲ့ စာတွေထဲက ကောက်နုတ်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ လောကဝိဟာ၊ ကျောင်းသားဝတ္တရား၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကျောင်းသားဘဝနှင့် ပညာရေးအမြင် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို အထက်တန်းကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ အောင်ဆန်းဇာနည်ကဗျာ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသီချင်းတို့ကိုလည်း မူလတန်း ကျောင်းသုံးစာအုပ်တို့မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မူလတန်းအဆင့်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပဲ ကျန်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။
နဝမတန်း ပင်ရင်းမြန်မာစကားပြေ လက်ရွေးစင် မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကျောင်းသားဘဝနှင့် ပညာရေးအမြင် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိထဲက ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပညာရေးဖြတ်သန်းမှု၊ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမြင်၊ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားဘဝ တစိတ်တဒေသကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေးကို ပိုပြီး စိတ်သန်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းစာထက် နိုင်ငံရေးကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ကျောင်းကနေ နှစ်ဝက်မှာထွက်ပြီး သခင်ဘဝ ပြောင်းလဲခဲ့ပုံတွေကို ရေးသားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပညာရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့အမြင်ကို ရှင်းလင်းရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲက လူအများ အနှစ်သက်ဆုံး စာပိုဒ်ကလေးကတော့ “လောကပြင်ကျယ်တည်းဟူသော ကျောင်းကြီး၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုခက်တွင်းမှသည် မြေကြီး ထဲသို့ ရောက်သည်အထိ ပညာသင်သားများ ဖြစ်နေကြပေသည်။” ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ စာပိုဒ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ‘အောင်ဆန်းဇာနည်’ ကဗျာကို လက်ရှိ တတိယတန်း မြန်မာ ဖတ်စာမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ‘ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း’လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ စတုတ္ထတန်း မြန်မာဖတ်စာမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ အဲဒီသင်ခန်းစာမှာ ရေနံ့သာရွာ မူလတန်းကျောင်းမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပရင်း ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြောပြတဲ့ပုံစံ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ဆရာကြီးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဘဝ တစိတ်တဒေသနဲ့အတူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လေးစားစရာ စိတ်ဓာတ်တွေအကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့ကို ဖော်ပြရရင် “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ သတ္တိလည်းရှိတယ်။ သဘောထားလည်း အလွန်ကြီးတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်သူလို သဘောမထားဘူး။ ရန်ငြိုးလည်း မထားဘူး။ သူလုပ်သမျှ လုပ်ငန်း တွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ သဘောထားကြီးတယ်။ ဘယ်သူ့ကို မဆို မေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံတယ်။” ဆိုတဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကလေးတွေကို သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာထဲက လူကြီးတွေပါ သတိပြုရမယ့် အချက်တစ်ခုကို သတိထား မိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်ခန်းစာရဲ့ နောက်ဘက်က မေးခွန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီသင်ခန်းစာအတွက် ဖြေရမယ့်မေးခွန်း စုစုပေါင်း ၇ ခုကို မေးထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးရပ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ဘယ်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ရောက်သလဲ၊ ကျောင်းသားဘဝမှာ ဘယ်တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်သလဲ၊ ဘယ်နှစ်မှာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သလဲ စတဲ့ မေးခွန်း ၆ ခုကို မေးပြီးတဲ့နောက် အရေးကြီးတဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်းကို မေးထားပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကတော့ ‘ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကျေးဇူးကို မည်သို့ ဆပ်ကြရမည်နည်း’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ရှေ့က သင်ခန်းစာထဲမှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ “တိုင်းပြည်အတွက် လွတ်လပ်ရေးရအောင် အသက်နဲ့လဲပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကျေးဇူးကို ပြန်ဆပ်ချင်ရင် သူ့လို အကျင့်ကောင်းပြီး အရည်အချင်းရှိအောင် ကြိုးစားကြရမယ်”ဆိုတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ သြဝါဒကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးတွေသာမဟုတ်ဘဲ လူကြီးတွေပါ စဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်နေပါတယ်။ လေးတန်း ကျောင်းသားတွေ သင်ယူရမယ့် ကျောင်းသင်ခန်းစာကို တိုင်းပြည်အုပ်စိုးနေသူတွေ၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသူတွေ အမှတ်ရစေဖို့ တခုခု လုပ်ရင်ကောင်းလေမလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့အသက်ပေးပြီး ရအောင်ယူပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဒီကနေ့အခြေအနေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ အပေါ် အလေးထားမှုတွေ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူတို့မိသားစုတွေအပေါ် ဆက်ဆံနေမှုတွေ ဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကို တွေးတောရင်း နှစ်စဉ် ဂါရဝပြုကြတဲ့ အာဇာနည်နေ့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေမှာ ရေးသားထားတဲ့ စာစုတွေထဲက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကျောင်းစာသင်ခန်းရဲ့ ပြင်ပမှာ ရှိနေကြသူတွေက ဘယ်လောက်အထိ အာရုံထားသလဲဆိုတာကိုပါ ဆက်စပ်တွေးတောမိပါတယ်။
တကယ်လို့များ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကျေးဇူးဆပ်တာမဆပ်တာ အပထား သင်ခန်းစာ ထဲက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ပြောသလို အကျင့်ကောင်းပြီး အရည်အချင်းရှိအောင် ကြိုးစားကြရင် ကောင်းလေစွ လို့လည်း ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူများ အေးချမ်းတဲ့အရိပ်အောက်မှာ နေထိုင်ခွင့် ရရှိပါစေ။ ။
ထိန်လင်း (၁၅ ၊ ၇၊ ၂ဝဝ၉)
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် နော်ဝေအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ၏ ထုတ်လွှင့်ချက်အား ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
၀ီရ / ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉
ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ရှိသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) အတွင်း ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ဝင်ရောက်ရိုက်ကူးခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့က ပိတ်ပင်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ဘွဲ့နှင်းသဘင်၊ ဂျပ်ဆင်နှင့် ဦးချစ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတဲ့ဘက်ကို ဗီဒီယို ရှူတင်အတွက် ဒီလဆန်းပိုင်းက ကျနော်သွားမေးတော့ ဒီအထဲမှာ ရိုက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ဂိတ်မှာ စောင့်နေတဲ့ ဆရာနဲ့ ဂိတ်ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ ဒီနှစ်ကုန်တဲ့အထိ ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပဲ ပြောတယ်” ဟု ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် သွားရောက်မေးမြန်းသည့် ရိုက်ကွင်းတာဝန်ခံတဦးက ပြောသည်။
ယခု ပိတ်ပင်လိုက်သည့် ပင်မဘက်ခြမ်းတွင် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်၊ သစ်ပုတ်ပင်၊ ဂျပ်ဆင်အပြင် RC ခေါ် ကျောင်းသားနားနေဆောင် စသည့် အထင်ကရ နေရာများရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရ၍ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း ရိုက်ကူးရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဂျပ်ဆင်နှင့် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် ရိုက်ကွင်းအတွက် နေရာအစားထိုးရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း ထိုရိုက်ကွင်းတာဝန်ခံက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်ရှိ အဓိပတိလမ်းမကြီး ဂိတ်ပေါက်မှလွဲ၍ အခြားဝင်/ထွက်ဂိတ်အားလုံးကို ဖြတ်သန်းခွင့် ပိတ်ထားပြီး ဝင်ရောက်သူများအား လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်းတို့ ယနေ့တိုင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်း ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်လိုင်စင်ရထားသည့် သိင်္ဂီရွှေရည် ဓာတ်ပုံတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း မကြားမိသေးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လည်း အထိနာခဲ့သည့်အတွက် ပြင်ဆင်စရာများ ရှိနေကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီအတိုင်းပြိုပျက်နေတာကို အသိမခံချင်လို့ အထဲမှာ ရိုက်ခွင့်မပေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ ဥပမာ အုတ်ခုံတို့၊ ဆိုင်းဘုတ်တို့၊ အဆောင်ခေါင်မိုးတို့၊ အဆောင်ကူးလမ်းကြားတို့ဆိုရင် ကြည့်မကောင်းအောင် ပျက်စီးနေပြီ။ တချို့နေရာတွေဆို မြက်ပင်တွေ၊ အုတ်ခဲကျိုးတွေက ဒီအတိုင်း ပြန့်ကျဲနေတာကိုး။ ကျနော်တို့ဓာတ်ပုံတိုက်က ဘွဲ့နှင်းသဘင်အနီးအနားနဲ့ ဘွဲ့ယူတဲ့သူတွေ ငှားတာလောက်ပဲဆိုတော့ လှတဲ့နေရာတွေလောက်ပဲ ရွေးရိုက်တာလေ” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) အတွင်းပိုင်းမှလွဲ၍ ကျန်ရှိသည့် သထုံလမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် အုတ်ခုံနေရာ၊ စားသောက်ဆိုင်တို့တွင် ရိုက်ကူးခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရိုက်ကူးသူများက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျောင်းသားများ၏ စုစည်းနေသည့်အင်အားကို ဖြိုခွင်းရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူရန် ရည်ရွယ်၍ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်၌ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို ရန်ကုန်မြို့ပြင် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ ပြောင်းရွှေ့စေပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) နေရာတွင် ဒီပလိုမာသင်တန်းများသာ တက်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန် ဝင်ရောက်ခွင့်မရခဲ့သည့် ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူ နိုင်ငံခြားသားတဦးက “လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက အဓိပတိလမ်းမကြီးကနေ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို မြင်တော့ အပြင်ကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဂိတ်ဝန်ထမ်းတွေက စောင့်ကြည့်နေတယ်။ အထဲဝင်ဖို့ ခွင့်တောင်းတော့ ကပျာကယာနဲ့ ငြင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် ရေးထားပါလား။ အခုဟာက ရေးထားတာလည်း မရှိဘူးလေ။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဆီသွားရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ ဒီအတိုင်းဆို။ ဒါနဲ့ ဂိတ်အပြင်ကနေပဲ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရဲ့အဝေးမြင်ကွင်းကို ရိုက်ခွင့်ရခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်သဟာယအသင်းမှ တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာများခေါ်ယူ
ပညာသင်ဆုနှင့် ပညာ ထူးချွန်ဆုများကို နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်ပေးနေသော ရခိုင်သဟာယ အသင်း ( ရန်ကုန်) မှ တက္ကသိုလ် ပညာ သင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိသည့် ရခိုင်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပညာသင် ဆုများ ချီးမြှင့်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ် ယူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ပညာသင်ဆုများကို လျှောက်ထားလိုသူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
လျှောက်လွှာများကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် အသင်းတည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ် သမိန်ဗရမ်းလမ်း အမှတ် ၁၁၅ ပထမထပ်တွင် ရယူနိုင်ကြောင်း အသင်းဝင် တဦးက ပြောသည်။
ရခိုင်သာဟာယ အသင်းသည် ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲ ရှိနေသော ရခိုင်ကျောင်းသားများကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ စပြီး နှစ်စဉ် ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်လာသော အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်ပြီ်း ၂၀၀၈- ၀၉ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့် တွင် ရခိုင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၃၅ ဦးကို ပညာသင် ဆုများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး အထက်တန်း အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၇ မြို့နယ်မှ ကျောင်းသား ၃၄ ဦးကို ပညာသင်ဆု ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
၎င်းပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၄ မြို့နယ်မှ မူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသား ၄၂၀ကိုလည်း ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ်အတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တော သုံးမြို့နယ်ရှိ မူလတန်းကျောင်းသားများကို ယူနီဆက်မှ ကူညီပေးခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်ရှိ မူလတန်း ကျောင်းသားများကို ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ်တွင် ပညာသင် ထောက်ပံ့ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း မရှိကြောင်း အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် အတွင်း တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့်တွင် ရခိုင်လူမှုရေးအသင်း ( ဂျပန် ) မှ ( ၂၂ ) ဦး၊ ရခိုင်ဖေါင်ဒေးရှင်း ( စင်္ကာပူ ) မှ ( ၃၅ ) ဦး၊ ရခိုင်အမျိုးသားပညာရေး ရံပုံငွေအဖွဲ့မလေးရှားမှ ( ၅ ) ဦး၊ ရခိုင်မိသားစု ( ကာတာ ) မှ ( ၃ ) ဦး၊ ရခိုင်သဟာယအသင်း ( ရန်ကုန် ) မှ ( ၆၅ ) ဦးနှင့် MR. YOKO YAMA YOKO ဂျပန်မှ ( ၅ ) ဦး ချီးမြှင့် ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၎င်းပြင် အသင်းကြီးမှ ရခိုင်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ဆုများ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်း လိုသူများအားလည်း အသင်းကြီးနှင့် ဆက်သွယ် လှူဒါန်းရန် ဆော်သြထားကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်သဟာယ အသင်းကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇူလှိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ပုဇွန်တောင် အစိုးရ တန်းမြှင့်ကျောင်း ခန်းမဆောင်တွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်ဆိုရှယ် ကလပ် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင်က တည်ရှိနေသော ရခိုင်ဆိုရှယ်ကလပ်မှာ ခေတ်နှင့် မလျော်ညီ သဖြင့် ရခိုင်သာဟာယ အသင်းသို့ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အသင်း၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဌကြီးမှာ ဦးစိန်ညိုထွန်း (အိုင်စီအက်စ်) ဖြစ်ပြီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးစောမြအောင် (တရားသူကြီး) တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဝေးသင်စာမေးပွဲ စာကူးဖြေသူ များပြား
အောင်ကျော်မိုး / ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉
လက်ရှိ ဖြေဆိုနေသည့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲများတွင် စာကူးဖြေသူ အလွန်များကြောင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ် တို့၌် ဖြေဆိုနေသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ဥပဒေ ပထမနှစ် ဖြေဆိုနေသည့် ကျောင်းသူတဦးက “သမီးတို့ စာမေးပွဲခန်းမှာ ကျောင်းသား (၅ဝ) နီးပါး လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ကူးချတဲ့သူက တဝက်နီးနီးလောက်ရှိတယ်။ စာမေးပွဲ ဒုတိယနေ့မှာ အခန်းစောင့်က စာကူးဖြေတဲ့သူ တွေကို သူတို့ကူးတဲ့ စက္ကူတွေ၊ စတစ်ကာတွေ အားလုံးကို သိမ်းသွားပြီး ခုံနံပါတ်တွေကိုလည်း မှတ်သွားတယ်။ စုစုပေါင်း အယောက် (၂ဝ) လောက်ရှိတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လို အရေးယူမလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ စာမေးပွဲ ဆက်ပြီးပေးဖြေတာတော့ တွေ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင် ပထဝီဘာသာအဓိကဖြင့် တတိယနှစ် ဖြေဆိုနေသူ ကျောင်းသား တဦး ကလည်း ၎င်းတို့ စာမေးပွဲခန်းမှာလည်း အများစုသည် စာကူးပြီး ဖြေဆိုကြကြောင်း၊ စာကူးရန်အတွက် အဖြေ ရေးထားသည့် မိုက္ကရိုခေါ် သေးငယ်သည့် စက္ကူလေးများ၊ ခေါက်၍ရသော ဘာဂျာများ၊ စတစ်ကာများ စသဖြင့် တွေ့ရကြောင်း၊ စာမေးပွဲအခန်းစောင့် ဆရာ၊ ဆရာမ အများစုက မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ပေးကြပြီး အချို့ ဆရာမများမှာမူ စာမေးပွဲဖြေချိန် (၁) နာရီလောက် ရှိလာချိန်တွင် “ဟေ့ တော်ကြတော့၊ အောင်မှတ်တော့ ရလောက်ပြီ၊ တော်ကြတော့ သိမ်းကြတော့” ဟု သတိပေးတတ်ကြောင်း၊ စာကူးသူများကိုမူ ခုံနံပါတ်မှတ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမရှိကြောင်း ပြောသည်။
စာမေးပွဲဖြေသည့် ကျောင်းသားဦးရေမှာ ပထမဆုံးနေ့တွင်သာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တို့တွင် တဖြည်း ဖြည်း နည်းသွား ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ အဆိုပါကျောင်းသားများသည် စာမေးပွဲတွင် ဖြေရမည့် စာနည်းနည်း ကိုပင် မကျက်နိုင်သူများ၊ ရှေ့ပိုင်း ရက်တို့တွင် မဖြေနိုင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ စာဖြေကျောင်းသူ က ပြောသည်။
စာမေးပွဲဖြေသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ပုံမှန်အားဖြင့် စာမေးပွဲခန်းထဲ မဝင်ခင် စစ်ဆေးရကြောင်း၊ စာမေးပွဲခန်းထဲတွင် စာကူးနေသည်ကို မြင်တွေ့ရပါက ခုံနံပါတ် မှတ်ထားပြီး အထက်သို့ တင်ပြရန် ညွှန်ကြား ချက်ရှိကြောင်း၊ အထောက်အထားနှင့် တွေ့ပါက စာမေးပွဲကို ကျရှုံးပေးမည့်အပြင် နောက်ထပ် (၂) နှစ် (၃) နှစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ပိတ်ပင်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ နည်းပြ ဆရာမတဦးက ပြောသည်။
သို့သော် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာကူးသည်ကို တိတိကျကျ အရေးမယူခြင်းမှာ ဆူပူမှုမဖြစ်စေရန် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ရန်ဆိုသည့် ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ဖြစ်သည့်အပြင် ဆရာများက ကျောင်းသားများ နစ်နာမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် အရေးမယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုဆရာမက ရှင်းပြသည်။
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဟောင်းတဦးကမူ “အဝေးသင် တက္ကသိုလ်ဆိုပေမယ့် ဘာကိုမှ ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် စာသင်ပြတာ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တာ မရှိဘူး။ တနှစ် (၂) ကြိမ်လောက် စာစဉ်တွေကို လက်ရေးနဲ့ကူးတင်ရုံပဲ၊ နောက်စာမေးပွဲနီးမှ အနီးကပ်ဆိုပြီး (၁၀) ရက်ဖွင့်တယ်၊ ကျောင်းသားတွေက မသွားသူ များတယ်။ ဒီတော့ စာလုံးဝ သင်မထားတဲ့၊ မတတ်တဲ့ ကလေးတွေ စာမေးပွဲဝင် ဖြေရတာမျိုး ဖြစ်နေလို့ ကူးချတဲ့ ပြဿနာ ပေါ်လာရတာ။ တဖက်ကလည်း စာမေးပွဲအခန်းစောင့်တွေက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်မလုပ်ကြဘူး။ လုပ်ရင်လည်း စာမေးပွဲဖြေတဲ့ ကလေး (၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင် ဖြေနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး။ နောက်ဆုံး ပြဿနာအရင်းခံဟာ ပညာရေး စနစ်သာဖြစ်တယ်” ဟု ဝေဖန်ထောက်ပြသည်။
ယခုကဲ့သို့ စာမေးပွဲခန်းအတွင်း စာကူးသည်ကို အခန်းစောင့် ဆရာများက လျစ်လျူရှုပေးရန် ဆိုပြီး ယခင်က ကျောင်းသား တယောက် ကျပ် (၂ဝဝ) မှ (၃ဝဝ) နှုန်း နေ့စဉ် ကောက်ခံထည့်ဝင်ရခြင်း ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုစာမေးပွဲတွင်မူ မရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲများကို နိုဝင်ဘာ (၃) ရက်နေ့အထိ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။